Ushwele Okhishwa UMongameli Wenza OFakazi BakaJehova Bakhululwe ETurkmenistan
ULIMI ISpanishi Isi-Albania Isi-Armenia Isi-Azerbaijani Isi-Estonia Isi-Ewe Isi-Indonesia Isi-Ukraine IsiBhunu IsiChewa IsiCroatia IsiCzech IsiDanishi IsiDashi IsiFinishi IsiFulentshi IsiGeorgia IsiGreki IsiHiligaynon IsiHungary IsiJalimane IsiJapane IsiKikaonde IsiKinyarwanda IsiKirundi IsiKorea IsiLithuania IsiMalagasy IsiMyanmar IsiNgisi IsiNorway IsiNtaliyane IsiPedi IsiPolishi IsiPutukezi IsiRashiya IsiRomania IsiSerbia IsiSerbia (SesiRoma) IsiShayina SesiMandarin (Esenziwe Lula) IsiShayina SesiMandarin (Sezinhlamvu Zakudala) IsiSlovak IsiSlovenia IsiSwahili IsiSwidi IsiTagalog IsiTurkey IsiVietnam IsiXhosa IsiYoruba IsiZulu
Esenzakalweni esasingalindelwe muntu, uMongameli uGurbanguly Berdimuhamedov wakhulula ngoshwele oFakazi BakaJehova abangu-8 ababeboshelwe ukholo lwabo eTurkmenistan. Babephakathi kweziboshwa ezakhululwa ngo-October 22, 2014. Abayisithupha kulab’oFakazi babeboshelwe ukungayi empini ngenxa kanembeza wabo kanti ababili kubo babeboshelwe amacala angamanga okwenza umsebenzi wenkolo.
Isithombe esingenhla (kusukela kwesobunxele ukuya kwesokudla): U-Aibek Salayev, uMatkarim Aminov noBahram Shamuradov
Izinsizwa ezenqaba ukuya empini ngenxa kanembeza, ezineminyaka ephakathi kwengu-18 no-23, zaboshelwa eKoloni Lokuhlushwa LaseSeydi, elisogwadule lwaseTurkmenistan. UMerdan Amanov, uPavel Paymov, uSuhrab Rahmanberdyyev no-Amirlan Tolkachev baboshelwa ejele lombuso elivamile. UMatkarim Aminov noDovran Matyakubov (abangekho esithombeni) babesejele lombuso elinomthetho oqinile ngoba kuthiwa babeye baboshwa izikhathi eziningana. Ngesikhathi zisejele, lezi zinsizwa zazikhuthazelele ukuhlukunyezwa nokuphila ngaphansi kwezimo ezidabukisayo.
Lab’oFakazi ababili ababoshelwa amacala amanga, u-Aibek Salayev oneminyaka engu-35 noBahram Shamuradov oneminyaka engu-42, nabo babesejele lombuso elivamile eSeydi. Bobabili babedonsa iminyaka emine ngenxa yezinkolelo nezenzo zabo zenkolo. Bahlukunyezwa kakhulu ngesikhathi besejele, naphezu kokuboshwa ngokungafanele ngamacala angamanga.
U-Amirlan Tolkachev noSuhrab Rahmanberdyyev
Munye kuphela uFakazi osaboshiwe eTurkmenistan, uRuslan Narkuliev. Waboshelwa ukwenqaba ukuya empini ngenxa kanembeza emasontweni ambalwa ngaphambi kokukhishwa kukashwele futhi ngesikhathi ukhishwa kungenzeka iHhovisi LikaMongameli lalingenalo igama lakhe. Abameli bakhe bakhulumisana neziphathimandla zaseTurkmenistan ukuze akhululwe.
UMongameli uBerdimuhamedov wathatha isinyathelo esincomekayo nesiwujuqu ngesikhathi ewanika ushwele la madoda angu-8 ayeboshelwe ukholo. Labo abajabulela inkululeko engokwenkolo banethemba lokuthi lokhu kuyisiqalo soshintsho eTurkmenistan, ushintsho oluzovumela oFakazi BakaJehova ukuba baphile ngokuvumelana nonembeza wabo ngaphandle kokwesaba ukushushiswa noma ukuboshwa.